Dowladda oo ka hadashay dagaal ka dhacay caawo Dal Jirka Dahsoon – Xorriya Online
Dowlada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaal ka dhacay Muqdisho caawa saacadda marka ay ahayd abaare 1-dii habeenimo.
“Malleeshiyaad hubaysan ayaa caawa saacadda markay ahayd 1-dii habeenimo (1am)soo weeraray baraha Ciidamada Qalabka Sida ay ku leeyihiin qaybo kamid ah Caasimadda Muqdisho.” ayay dowladda ku sheegtay war qoraal oo uu saaray Wasiirka Amniga Gudaha Xasan Xundubey Jumcaale.”Sarkaal u hadlay malleeshiyadaas ayaa caawa fiidkii hore warbaahinta u sheegay in ay weerar ku yihiin xarumaha Dowladda isla markaana ay qabsadeen qaybo kamid ah Muqdisho. Ciidamada Qalabka Sida markaa kaddib waxay galeen heegan buuxa.”
“Maleeshiyadaasi la soo abaabulay mardhoweyd ayay weerarkii la filayey ee ay sii sheegteen ku soo qaadeen barihii ay ku sugnaayeen Ciidamada Qalabka Sida. Ciidamada Dowladdu way iska difaaceen weerarkaas la soo qorsheeyey, waanay ka guuleysteen maleeshiyadii weerarka soo qaadday.”
Warka ay dowladda soo saartay ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in “Faahfaahinta weerarka la inagu soo qaaday gadaal ayaanu idinkala soo wadaagi doonnaa.”
Hase yeeshee dhanka dhanka mucaaradka ayaa waxaa ka soo baxaya war ka duwan kan ay dowladda soo saartay oo Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariife ayaa baraha Facebook iyo Twitter ku baahayiyay qoraallo ay ku sheegeen in la soo weeraray hoteelka Maa’ida ee ay degaanaayeen.
Hassan Sheekh Maxamuud ayaa qoraalkan ku baahiyay barta Faceebook: